Ho An’​ny Mpamaky | Ny Tilikambo Fiambenana, Janoary 2013
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mongol Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Télougou Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tamin’ny Jolay 1879 no nanomboka navoaka ity gazety vakinao ity. Nisy fandrosoana foana teo amin’izao tontolo izao taorian’izay, ka efa niova imbetsaka koa ny endrik’ity gazety ity. Mbola hisy fiovana indray manomboka amin’ity laharana ity.
Mihabetsaka ny olona tia maka na mamaky fanazavana ao amin’ny Internet, any amin’ny tany maro. Bokotra kely fotsiny mantsy no tsindriana, dia efa mahita fanazavana tsy hita afa-tsy ao amin’ny Internet. Misy boky sy gazety maro azo vakina koa ao.
Nohatsarainay àry ny tranonkalanay ao amin’ny www.jw.org, ka lasa manintona kokoa ny endriny sady lasa mora hitadiavana fanazavana. Afaka mamaky boky sy gazety amin’ny fiteny 430 mahery ny olona mitsidika an’io tranonkala io. Tsy ho hita ato amin’ity gazety ity intsony ny lahatsoratra sasany mpiseho tato, * manomboka amin’ity volana ity. Ho azonao vakina ao amin’io tranonkala io anefa izy ireny.
Hamoaka lahatsoratra betsaka kokoa izahay, ary ao amin’ny Internet ihany no ahitana izany. Lasa 16 pejy àry ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana ho an’ny besinimaro fa tsy 32 pejy intsony, manomboka amin’ity gazety ity. Efa misy amin’ny fiteny 204 izao Ny Tilikambo Fiambenana. Mety ho afaka hamoaka azy io amin’ny fiteny maro kokoa izao izahay, satria efa vitsy ny pejiny.
Manantena izahay fa hihabetsaka ny olona handre an’ilay hafatra mamonjy aina ao amin’ny Baiboly noho izany fanovana izany. Vonona hanome fanazavana mahaliana foana izahay, na ato amin’ity gazety ity na ao amin’ny Internet, mba hanampiana an’ireo olona tia Baiboly sy te hahafantatra izay tena voalaza ao.
^ feh. 5 Anisan’izany ireto: “Ho An’ny Ankizy sy ny Tanora”, izay manampy ny tanora hianatra Baiboly, ary ilay hoe “Andao Hianatra Baiboly!”, izay natao hampianaran’ny ray aman-dreny ny zanany telo taona no ho midina.
Hizara Hizara Ho An’ny Mpamaky
Fiovana Amin’ny Gazety Ny Tilikambo Fiambenana
Video: Ny Tilikambo Fiambenana, Navoaka Nanomboka Tamin’ny 1879